''Sodaan nutti baay'ate yeroo mara nutti deebite jennaan baqanne'' - BBC News Afaan Oromoo
''Sodaan nutti baay'ate yeroo mara nutti deebite jennaan baqanne''
Sababii ajjeechaa Sambata darbe Mooyyaleetti humni raayyaa ittisaa namoota nagaa 10 irratti raawwatameen walqabatee jiraattota magaalaa dabalatee bakkeewwan hedduu naannawichaa irraa gara Keeniyaatti baqataa kan jiran kuma 30 akka gahan, baqattoonni BBC'tti himaniiru.
Jiraattoonni akka jedhanitti ammalleen kanneen kuma hedduu ta'an daangaa ce'aa jiru.
''Yoo xiqqaate ummanni kuma soddomaa ol ni ta'u. Baay'ee dha. Kan iddoo tokko jiruyyuu hagas hin ta'a,'' jedhu maanguddoofi abbaa ijoollee 11 kan ta'aniif Mooyyalee lafa jiraachaa turan irraa maatii isaanii waliin Keeniyaatti kan baqatan.
Lubbuu keenyaaf wabii dhabne Keeniyaatti ceene.
Maqaan haa hafu jedhan , Jaarsa biyyaa
Akka maangudddoon kuni jedhanitti, humni raayyaa ittisaa konkolaataa adii xiqqaan gad-baate dhukaasa bante ummata fixxe.
''Konkoolaataa adii guuttee yeroo dhukaastu argeera. Yoo xiqqaate loltonni kun nama soddoma ni ta'u. Yoo akkam xiqqaates 20 gadi hinta'an. ''
Dargaggeessi biraa yeroo ammaa Keeniyaatti baqate jiru tokkoos hiriyyaan isaa yeroo dhahamu arguu isaa hima.
Loltoonni rasaasa dhukaasaa turan soddomaa ol ni ta'u kan jedhu dargaggeessi kun, akka hiriyaasaa itti ajjeesan yoo dubbatu:
'''Yoo isaan dhufan namni hin baqanne. Qara achuma keessa ya'an. Kaanu Qoncoroo kan jedhamu waraanni jilbeeffachiiftee gurra mirgaatti qawwee qabuudhaan gurra kaaniin keessaa baaste. ''
Gama kaaniin, gaafa Dilbataa walgahiin ummataa, qondaaltota waraanaafi mootummaa waliin taasifame ture.
Jaarsii biyyaa walgahicharratti irratti hirmaatanii turanis fala dhabuu isaanii himu.
''Guyyaa cufa nu sobani. Gaafa soddaa nu sobani. Gaafa Mooyyalee nu sobani. Guyyaa cufa akkana. Akka malee hamtu irraa arge jennaan baqadhe,'' jedhan.
'Sodaatu nutti baay'ate, yeroo mara nutti deebiite jennaan baqanne. Humni waraanaa ijoolleen waancaa yeroo fudhattee galtu fixxe. Iyyinee furmaata hin argannu. Akka jaarsa biyyaatti Finfinnee dhaqne himanne. Dubbii nama jalaa hin caqasani. Lubbuu keenyaaf wabii dhabnaan Keeniyaatti ceene.''
•Dhukaasa dogongoraan jedhameen 10 ajjeefamanii kaan madaa'an
'Osoo hospitaalatti tajaajila kennaa jiruun reeffa obboleessa abbaa kiyyaa arge'
Hanga guyyaa humnoota namoota fixan seeraaf hin dhiheessineefi mootummaan wabii nu kennutti gara qe'eetti deebi'uuuf yaada hin qabnu jechuun BBC'tti himaniiru.
Guyyaa dheengaddaa Keeniyaatti baqachuu isaanii kan dubbatan haati ijoollee 11 akka himanitti immoo ollaadhuma isaanitti nama ajjeesanii jennaan daangaa qaxxaamuruun baqatan.
''Olluma keenyatti nama obbaasani (ajjeesani). Otuma ciifnuu oollaa keessa dhufanii nu haadhani maatii, ummata balleessuu jirani. Nabsee teenna jennee baqanne.''
Baqattoonni kunneen akka jedhanitti, Booranni Keeniyaa jiru qale isaan simachuu dubbatu. Haata'u malee, gargaarsa akka barbaadan himu.
''Maatiin nu jalaa miidhamee jira. Okkotee waan irra dhaabbanu hinqabnu. Gargaarsa kan akka sagaleefaa(nyaata) hin arganne. Addunyaaniyyuu badii kana nu gartee nu dhageette fedhaayyuu.''
''Bakkeewwan kan akka Malab jedhan, Caamuuq, ollaa waaqoo, qeeqal Dambii, hulaa tokko namni hin baqatiin hinjiru.''
Magaalaan Mooyyalee guyyaa kaleessaa namni waan keessaa baqateef ona taate oolte jechuun namoonni haasofsiifne nutti himaniiru.